DHAMAQE OO SHEEGAY IN DAWLADO XAL U HELEYSO CABASHOOYINKA DADWEYNAHA | Deegaanka News
DHAMAQE OO SHEEGAY IN DAWLADO XAL U HELEYSO CABASHOOYINKA DADWEYNAHA
ADDIS ABABA – Ku-xigeenka EPRDF ayaa sheegay in fiiro gaar ah la siinayo sidii loo xalin lahaa cabshooyinka dadweynaha.
Waxaa uu masuulku si gaar ah carrabka ugu dhuftay nidaamka dawladnimo wanaaga oo meesha ka maqan.Demaqe Mokenan oo hadda ku sugan shirka EPRDF uga socda Maqale ayaa tilmaamay in dadaal dheerad ah la galin doono sidii loo hirgalin lahaa maamulka suuban, balse faahfaahin dheeraad ah kama bixin.
Waxaa u masuulku intaa ku daray in shirka EPRDF diirada lagu saarayo xilkasnimada, daacdnimada iyo sinaanshaha iyada laga faa’iideysanayo waayo-aragnimadii 5-tii sano ee la soo dhaafay.
Shirarkii uu dhacay xisbiyada ku bahoobay EPRDF ayaa dhamaan lagu muujiyey in ay jiraan dib-u-dhacyo dhanka maamul wanaaga ah oo loo baahan yahay in la xaliyo.
Waxaa jira cabshooyin badan oo dadweynaha dalku ka muujiyaan adeegyada kala duwan ee dawlada, gaar ahaan eexda, musumaasuqa iyo ku takrifalka hantida dawlada.
Shirka EPRDF oo galay maalintii labaad ayaa looga fadhiya in lagu furdaamiyo cabashada dadweynaha ee kala duwan, balse qodobka ugu muhiimsan ee kulanka horyaal ayaa ah dhisada dawlada damaanad qaadi karta xalka ay dadku tabanayaan.
Kulanka oo 4 maalmood socon doona ayaa lagu dooran doona gudoomiyaha ururka oo si toos ah u noqon doona ra’isulwasaaraha dalka. Waxaa aad loo hadal haya in gudoomiyaha xiligan ee EPRDF, Hailemaraim, uu soo noqdo.
Dalwlada cusub ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo todobaadka soo socda iyada oo lagu ansixin doono fadhiga baarlamaanka oo dhici doona dhamaadka bisha Sebtember.Ku-xigeenka EPRDF ayaa hadalkiisa ku soo xidhay in dawladu ka shaqayn doonto raaligalinta shacabka.